Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Nke a ọ bụ ụzọ a ga-esi kwụsị ọrịa na-efe efe n’elu ụwa? » Page 2
Iji mezuo ma kwado mmetụta a, omume ndị a kwesịrị ime mgbanwe na ọkwa na ọkwa obodo. Ha ga-akpalite mgbanwe ndị dị mkpa na atumatu ọha na eze, omume azụmaahịa, na omume ndị ahịa. Mazọ okporo ụzọ ahụ gụnyere “Maapụ Ngwọta” nke usoro kachasị mma nke ndị otu jikọrọ aka jikọọ ọnụ wee hazie iji kwado teknụzụ ọhụụ iji soro ma kwụọ ụgwọ ọrụ yana iji dọta itinye ego na ọha na nke onwe.
“Nchoputa mbu nke onu ahia oria ojoo etinyewo onu ahia ha na pasent 0.2 nke onu ogugu ndi aturu mmebi sitere na COVID-19, ”Ka Andrey Kushlin kwuru, EndPandemics ngalaba-oche na onye na-ede akwụkwọ ahụ. “O kwesiri ka o doo ndi mmadu anya na ndi ochichi, ndi ahia na ndi ndu obodo n’enweghi uzo ozo di nma iji tinye mgbochi n’ uzo nke atumatu ‘Build Back Better’ ma obu ‘Green Recovery’. Ebumnuche EndPandemics na-enyere aka ịtọlite, kwalite ma kwagide mbọ ndị a site na inwe obodo, nghọta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. ”
Nzukọ AIPA pụrụ iche nke taa na-esochi mmemme pụrụ iche ọzọ nke onye otu ASEAN Thailand hiwere na May 27 bụ nke ndị Minista Ahụike na Gburugburu ebe obibi kwere nkwa itinye usoro a na-ahụ maka otu Health iji gbochie ntiwapụ ọzọ, gụnyere itinye ebumnuche maka ịzụ ahịa anụ ọhịa. "Anyị na-ahụ ihe ịrịba ama olile anya nke mba ndị otu ASEAN na ọ dịkarịa ala otu onye mmeri azụmahịa na-agabiga ọdachi a iji gbochie nke ọzọ," ka Steven Galster, Onye guzobere Freeland na onye isi oche nke EndPandemics kwuru. “Mgbochi bụ isi ihe, na otu ụzọ a ga-esi gbochie ụwa anyị ọrịa ọzọ bụ iwere okike dị ka ọgwụ mgbochi anyị na-adịgide adịgide ma na-adịte aka. Anyị ga-etinye ya na ya dịka ọ bụ mkpuchi ahụike anyị zuru ụwa ọnụ. ”
Ndi nnochite anya nke World Organization for Health Animal, Asia Development Bank, Global Initiative to End Wildlife Crime, Freeland, B.Grimm, na ndị otu NOW nyere ntinye ha na nyochaa mmalite nke ntiwapụ zoonotic, egwu sitere na ahia anụ ọhịa, iwu na ọdịiche amụma, echiche azụmahịa, usoro ego maka iweghachite Green, yana mwepụ ọrịa na-efe efe.
"Ndị gọọmentị na-eme ihe iji gbochie COVID-19 ịgbasa, gbalịsie ike ịgba ọgwụ mgbochi anyị megide ya, ma na-arụ ọrụ iji ghọta mmalite ya," ka John Scanlon, Onye isi oche nke Global Initiative to End Wildlife Crime na ndị otu nyocha nke ụzọ ahụ kwuru. N'oge ụfọdụ, anyị ga-agabiga ya, mana mgbe anyị gafere, ọ gaghị agabiga. N'ezie, dị anya na ya. Anyị maara ọnọdụ ndị na-eme ka ụmụ nje nwee ike ịmalite na ụmụ anụmanụ. Ihe ncheta ndi mmadu di nkenke, ma anyi nwere nlebara anya nke onye obula, anyi kwesiri itinye otutu uzo iji gbochie oria na-abia abia, nke ga-erite uru di iche iche di iche iche, ihu igwe anyi, ma nweta mmepe na-adigide. Nke a gụnyere ime mgbanwe banyere etu anyị si hazie ahịa anụ ọhịa, iji hụ na anyị were usoro 'Otu Ahụike' maka azụmaahịa, yana otu anyị ga-esi gbochie mpụ anụ ọhịa. "
"Ka anyị na-arụ ọrụ iji kwụsị ọrịa na-efe efe COVID-19, anyị ga-ewere ohere a dị oke mkpa iji zụlite akụnụba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke gụnyere ya, ma na-akwụsi ike site na ịchụso 'otu usoro ahụike,'" Bruce Dunn, Director of Safeguards Division na Sustainable Development na Ngalaba Mgbanwe Ihu Igwe nke Eshia Development Bank. “A ga-enweta nke a site n’ilekwasị anya na ụfọdụ ihe kpatara ọrịa zoonotic na-efe efe, gụnyere ịkwụsị ahia anụ ọhịa na-akwadoghị, itinye ego iji kpuchido ma weghachi okike, na ịkwalite ọrụ ubi na-adigide - si otú a mee ka ahụike mmadụ, ahụike anụmanụ, na ahụike gburugburu ebe obibi dịzie, ma mepụta ọrụ ndụ akwụkwọ ndụ. ”
Dr. Harald Link, Onye isi oche nke B.Grimm na onye mmekọ nke EndPandemics mgbasa ozi, nwere ihe a iji kwuo: “Dịka anyị nọ na mpaghara a, B.Grimm na ASEAN nwere ihe mgbaru ọsọ, ya bụ ọganihu, nkwụsi ike, nchekwa, na obi ụtọ. Ọrịa na-efe efe na-emetụta onye ọ bụla n'ụzọ ọjọọ, site na ndị mmadụ rue gọọmentị na azụmaahịa, yabụ anyị niile ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie nje na-esote ọzo. Anyị aghaghị iji azụmahịa na ọmịiko. Emume nke taa bụ nnukwu ọganiihu nye ndị obodo ASEAN n’ihe mgbochi mgbochi dabere na nchegbu anyị nwere maka ASEAN na ụwa. ”
Ọgwụgwụ Ọrịa bụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke na-achọ ịkwụsị ọrịa na-efe efe site na ịkọwapụta isi ihe kpatara ntiwapụ zoonotic, yana site na ichebe na ịmaliteghachi okike. EndPandemics kpọrọ ụwa ka itinye ego na ahụike ụwa. Ebuputara EndPandemics na mbido 2020 ma gunyere otutu ulo oru (nke kariri 80) nke na aru oru na mpaghara iri isii na nchekwa, oru ugbo, onodu ubochi, ahuike, azumahia, oru, akuko, nchekwa, ndi oru nta akuko na ndi ozo.